FANDAHARAN’ASA PROCOM : Mahazo tombontsoa ny Faritra Analanjirofo sy Atsinanana
Notanterahina nandritra ny roa andro tao amin’ny Hotel Victoria Beach Toamasina ny 14-15 jona lasa teo ny dinika eo amin’ny samy sehatra tsy miankina (dialogue privé-privé) ho an’ny Faritra Atsinanana sy ny Faritra Analanjirofo. 20 juin 2018
Dinika tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa Procom vatsian’ny Vondrona eropeanina, izay iarahany amin’ny minisiteran’ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Tetikasa izay nanomboka ny volana febroary 2015 ary maharitra 5 taona. Procom, natao indrindra hampiroboroboana ny toekarena malagasy, miainga avy amin’ny varotra. Tetikasa mikendry ny fiitaran’ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara mba hahatonga azy ireo ho afaka mifaninana tsara eo amin’ny tsena rezionaly, nasionaly ary ny tsena iraisam-pirenena. Mahatsapa mantsy ny vondrona eropeanina fa kitro ifaharan’ ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary mamorona asa maro.
Tohin’ilay dinika fakan-kevitra fanomanana natao ny volana avrily lasa teo ity notanterahina ny 14 sy 15 jona teo ity. Ireo fikambanan’ny mpandraharaha matihanina no mpandray anjara. Tanjona ny fampihaonana ireo mpandraharaha sy ny sehatra tsy miankina avy amin’ny faritra Analanjirofo sy Atsinanana. Tafiditra ao anatin’izany ny famahana olana amin’ireo sakantsakana mahazo ny seha-pihariana fanondrana vokatra mankany ivelany mba hihatsara ny kalitao, ny fizahantany maharitra, ny fomba atao hampifandraisana misimisy kokoa ny faritra roa amin’ny alalan’ny seranan-tsambo sy zotram-pitaterana hafa.
Taoarian’ny dinika roa andro, dia tafajoro ny komity manokana hanaraha-maso ny fampiharana ireo fehin-kevitra tapaka. Komity ahitana ireo avy amin’ny fikambanana mpandraharaha, ny Antenimieran’ny varotra. Hoentina amin’ireo tompon’andraiki-panjakana eo amin’ny sehatra rezionaly sy nasionaly ireo fehin-kevitra nivoaka nandritra ny dinika. Ireo seha-pihariana telo voaresaka, dia ny fandraharahana voly fanondrana, fizahantany ary ny seha-pitaterana, dia samy misy komity manokana hanara-maso avokoa ny fampiharana ireo fehin-kevitra tapaka. Niatrika ny fihainoana ny tatitry ny fehin-kevitra sy famaranana ny dinika ny tolakandron’ny zoma 15 jona ny masoivohon’ny vondrona eropeanina eto Madagasikara, Antonio Sanchez-Benedito.
Nandritra io fanaovana tatitra io, dia niantso an’ireo mpitondra fanjakana aty amin’ny faritra ireo mpandraharaha mba hiara-hidinika amin’izy ireo mba hahitam-bahaolana miaraka. Miantso ireo mpiara-miombon’antoka ara-tekinika sy ara-bola mba hiara-hamadika ho bainga ireo fehin-kevita nivoaka nandritra ny dinika. Tamin’ny alalan’ny GIZ izay fiaraha-miasa alemana, dia niantso ireo sehatra tsy miankina ao Toamasina izy ireo mba hiara-hientana momba ny fanatsarana ny tanànan’i Toamasina tafiditra ao anatin’izany ny fanangonana ireo fako sy fanatsarana ny moron- dranomasina. Ny vondrona eropeanina araka ny nambaran’ny masoivohony tao Toamasina, dia vonona hatrany hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampiroboroboana ny toekarena malagasy.